खलासी : हामीले बनाएको संरचनाको दोष
कतै खुट्टाहरू साटिन्छन् कि जस्तो लाग्ने । उफ् ! ठेल्लम ठेल । खुट्टा टेक्ने ठाउँ नमिलेर आकाश हेर्न अभिशप्त आँखाहरू । गाडीभित्र केको आकाश ? धुलो र खिया टाँसिएको घोप्टे छतले आकाश छेकिदिन्छ । मान्छेहरूको स्वाँस्वाँ र फ्वाँफ्वाँ ।
'वैदेशिक शिक्षाका लागि अवसर' गाडीका भित्तामा अर्ध च्यातित यस्तै केके पोस्टरहरू । स्वदेशमै गुणस्तरीय शिक्षा पाउने पोस्टर कहिले टाँसिएलान् ?
'ओ दाइ ! पछाडि सर्नु न पछाडि', झम्टिउँलाझैँ गरी खलासीले यात्रुलाई करायो ।
गाडीको कर्मचारीभन्दा सभ्य सुनिन्थ्यो होला । तर, मस्तिष्कमा खलासी शब्द इन्स्टल छ । खलासी- पूर्वाग्रहले पोतिएको शब्दजस्तो लाग्छ ।
अन्दाजी १८/१९ वर्षको । 'यो युवाको घर कता होला ?' जिङरिङ्ग परेको कपाल । मैलो जिन्सपाइन्ट । चर्को बोली । ओठमुख हेर्दा, समय भ्याएसम्म पुकारको फाँको चपाइरहने आदत छ कि जस्तो देखिने ।
'ठाउँ हुन पर्‍याे नि भाइ ? कति पछाडि सर्नु ?', गुम्सिएको यात्रुले पीडा मिसिएको आक्रोश पोख्यो ।
'झर्नेहरू अगाडिअगाडि आउनु है छिटोछिटो, भाडा हातमा लिएर', खलासी फेरि चिच्यायो । पछाडि छेउमा पुगेका केही यात्रु कन्दैकन्दै ढोकासम्म पुगे । दायाँ हातमा भाडा च्यापेर पहिलो यात्रु फुत्त ढोकाबाट निस्कियो ।
'कत्ति ढिलो गरेको यार छिटो आउनु पर्दैन ? कस्तो मु...', खलासीले विनम्रताको रेखा ताेड्यो । यात्रुलाई खाउँलाझैँ गरी बोल्यो ।'अलि राम्रो मुखले बोल न ओइ भाइ' भनूँ कि लाग्यो तर भन्न सकिएन । अरू पनि बोलेनन् ।
खलासीको हातमा भाडा टक्रिएपछि यात्रुलाई डाइलग दिँदै रिसाहा हलीले गोरु चुटेझैँ गाडी पिट्दै ड्राइभरलाई कुदाउन निर्देशन दियो । गाडी छुट्यो । नीलो अनुहार बोकेर यात्रु आफ्नो बाटो लाग्यो । गाडी चढ्दा के सोचेर चेढेको थियो, झर्दा नमीठाे अनुभव र आवेग लिएर फर्कियो । आज उसकाे दिन कसरी बित्छ होला ?
निकै सकसपूर्ण । आमाले शिशु जन्माएसरि भएर गाडीबाट यात्रुले निस्कनुपर्छ फुत्त, पैसा तिरेर, कर तिरेर । सेवा र सम्मान नपाइने देशका हामी नागरिक । थुइक्क जिन्दगी ! ! थुइक्क व्यवस्था ! !
यो दृश्य हेरिरहँदा यस्तै आवेगहरू मनमा उम्लिए । आफैँदेखि लाज लाग्यो ।
खलासीको रुखो निर्देशन र तितो व्यवहारको सिकार लाखौँ मानिसहरू हरेक दिन भइरहेका छन् । खलासीले किन यस्तो व्यवहार गर्छ ? खलासी भाइको कतै तपाईं नातेदार, छिमेकी अथवा शिक्षक त होइन ? हो भने कसरी यस्तो व्यवहारको निर्माण भयो ? अनि सबै खलासीले यस्तो व्यवहार पनि त गर्दैनन् होलान् नि ?
बसका कर्मचारीहरूले गर्ने शाब्दिक, सांकेतिक तथा भौतिक हिंसा तथा दुर्व्यवहारमा तपाईं हामी कुनै पनि बेला पर्न सक्छौँ । हिंसा तथा दुर्व्यवहार परिणाम हो । समग्र व्यवस्थाले जन्माएको फल हो ।
मानिसहरूसँग कस्तो व्यवहार गर्ने ? हामीले कक्षाकोठामा दिगो हुने गरी सिकाउने फुर्सद पायौँ कि पाएनौँ ? घरमा आफ्नो नानीलाई सिकाउन पायौँ कि पाएनौँ ? बस (यातायात) व्यवसाय सञ्चालक समितिले आफ्ना स्टाफहरूलाई मानवीय मूल्य मान्यता सिकाउने संस्कार दिने संरचना बनायौँ कि बनाएनौँ ? किन बनाएनौँ ? हामीलाई केले रोकेको छ ? हाम्रा हृदयहरू किन रित्तारित्ता छन् ? खलासी भाइले यस्तो व्यवहार गर्नु उसको रहर थियो कि बाध्यता ?
यो देशमा विभिन्न सामाजिक मुद्दामा काम गर्ने हजारौँ राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थाहरू छन् । किन यातायातजस्तो संवेदनशील पक्षको सुधार र गुणस्तरमा काम नगरेका होलान् ? कि मै गुम्नाम भएर ठालु पल्टेको हुँ ?
खलासी भाइले यात्रुलाई गरिरहेको व्यवहार अवलोकन गर्दै गर्दा मनमा थुप्रै प्रश्नका झिल्काहरू उठे । खलासीले यात्रुलाई मात्रै होइन, हामीले पनि खलासीलाई कस्तो व्यवहार गरिरहेका छौँ ? आफैँलाई सोधौँ न ।
खलासी त्यो, जसलाई जटिल र ठूला कुरा गर्न आउँदैन, जसले समयमा गतिलो शिक्षा पाएन, जसले यो देश छोड्न सकेन, सामाजिक, पारिवारिक तथा आर्थिक चक्रले पेलेर भित्तामा पुर्‍याएको व्यक्ति – खलासी । खलासी– तल्लो स्तरको नागरिक । तल्लो स्तरको पेसा । गरिब, छाडा, दीनदुखीको भागमा पर्ने अपमानित पेसा – खलासी । सायद तपाईं हामीले यस्तै सोच्छौँ । र, जस्तो सोच्छौँ, त्यस्तै व्यवहार गर्छौं ।
काठमाडौंको सार्वजनिक यातायातको यात्रा निक्कै दूषित छ । केको काठमाडौंमा मात्रै नेपाललैभरि यस्तै त हो नि । तर, काठमाडौंमा अत्ति नै छ है !
काम गर्ने ठाउँमा पुग्न र फर्किन निक्कै कठिनाइ मोल्न पर्छ । महिला, वृद्धवृद्धा, बालबाललिका तथा अशक्त नागरिकले हरेक दिन कुनै न कुनै हिंसा र दुर्व्यवहार खेपिरहेका छन् । यो देशमा आँखैअगाडि हिंसा हुँदा पनि मुखमा बुझो हालेर बस्नेहरूको लस्कर लामो छ । सडकदेखि सदनसम्म छ । नांगो लस्कर देख्दादेख्दै पनि नबोल्ने रमितेहरू हौँ- हामी ।
धन्न ! आज मैले सिट पाएको छु । एक जना अन्दाजी ४० उमेरका अपरिचित मानिस मेरो छेउमै बसेका छन् । हामी एकले अर्कालाई नहेरेजस्तै पुलुक्क पुलुक्क हेरिरहेका छौँ ।
'कहाँसम्म जाने ?', छेउका व्यक्तिले एकाएक मेरो गन्तव्यबारे सोधिहाले । राम्रै कन्फिडेन्स रहेछ ।
हामी नेपालीहरू हँसिलो । अरुसँग सजिलै अन्तर्क्रिया गर्ने स्वभाव हो जस्तो लाग्छ । तर, काठमाडौंका हामीहरूले स्वभाव गुमाउँदै गएका छौँ ।
'रत्नपार्कसम्म', उत्साहित हुँदै भनेँ ।
'के गर्नु हामीले त नैतिकता गुमाउँदै छौँजस्तो लाग्छ', उनले भने । अघि खलासीले गरेको व्यवहार उनका आँखाले पनि खिचिरहेका थिए । 'यस्तो व्यवहार खलासीले कुनै पनि बेला हामीलाई गर्न सक्छ', उनको पनि चित्त दुखेको रहेछ ।
'हो ! अरुलाई जसरी हुन्छ, उछिन्ने, जित्ने, अरुलाई पछारेर सफलताको टीका लगाउने सिकाइ संस्कृति बन्दै गएको छ', मैले थपेँ ।
धन, दौलत र प्रतिष्ठा आर्जनका लागि मानवीयता मार्ने स्कुलहरू खडा भएका छन् । शिक्षकहरू खडा भएका छन् । परीक्षा प्रणालीहरू खडा भएका छन् । यी सबैको परिणाम समाजले भोग्नुपर्नेछ । समयले आफ्नो मूल्य उठाउनेछ ।
सडकमा गुडिरहने सार्वजनिक साधनहरूबीच नदेखिने ठूलो युद्ध चलिरहेको हुन्छ । सवारीसाधन सञ्चालक तथा कर्मचारीको नाफाका लागि हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको युद्धमा हार्ने हामी नागरिकहरू नै हौँ । जसले रोजीरोटीका लागि सार्वजनिक यातायातका साधनबाट हरदिन धाइ रहनुपर्छ । जसको अरु कुनै विकल्प छैन । नागरिक मारेर कुनै पनि सामाजिक व्यवस्था दिगो र अनुकरणीय हुन सक्दैन । भनिन्छ, ‘कुनै पनि देशको औकात चिन्नका लागि सार्वजनिक यातायातलाई हेरे पुग्छ ।’
के गणतन्त्र, प्रजातन्त्र र न्यायको श्वास सार्वजनिक साधन चढ्नेहरूले पाएका छौँ ? कति सास्ती छ, भोग्नेहरूलाई थाहा छ । १० मिनेटको बाटो काट्न ४० मिनेट लाग्छ । हरेक दिन लाखौँ घण्टा, लाखौँ व्यक्तिको समय खेर गइरहेको छ । व्यक्तिको मात्रै समय खेर गइरहेको होइन, राज्यको खेर गइरहेको हो । अर्थतन्त्रको क्षति हो । देशको यो अस्तव्यस्ततालाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले नजरअन्दाज गरेजस्तो लाग्छ । सम्बोधन नगरेजस्तो लाग्छ ।
'हामीलाई भ्यू टावर होइन । धरहरा होइन । हामीलाई पानीजहाज पनि होइन । आरामले समयमै सस्तोमा साधन चढेर आफ्नो काम गर्न र कामपछि घर फर्किनु छ । जुनै पनि व्यवस्थाले हामीलाई यति गरिदिए पुग्छ । मानिसले मानिसलाई असल व्यवहार गरिदिने संस्कार सिकाइदिए पुग्छ', कुरैकुरामा उनले राजनीतिक असन्तुष्टि पनि पोखे ।
सन् २०१९ मा गरिएको एउटा सोधले काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै १२ देखि ३५ वर्षका झण्डै ८० प्रतिशत महिला तथा केटीहरूमाथि यौनहिंसा हुने तथ्यांक छ । एक्सन एड नेपालले गरेको एक अध्ययनअनुसार ६३ प्रतिशत महिलाहरूले सार्वजनिक साधनमा यात्रा गर्न असुरक्षित महसु्स गर्छन् । यसको जिम्मा खलासीको काँधमा पोख्न खोजेको होइन । अवस्था भयावह छ भन्न खोजिएको हाे । सिंगापुर, पेरिस, हङकङ, न्युयाेर्कलगायत सहरका नागरिकले सार्वजनिक यातायातको गतिलो सेवा पाएको सुन्दा डाहा लाग्छ । यस्तो सेवा र अधिकार हामीले कहिले पाऊँला ? बाँचुञ्जेल के असम्भव नै हो त ? के हामी रित्तो निधार लिएर जन्मिएका नागरिक हौँ ?
कक्षाकोठामा सानो पेसा र ठूलो पेसा भन्दै कतै पूर्वाहग्रह त बालबालिकाको मानसमा भरिदिएका छैनौँ ? कतै घरमा पनि यस्तै कथन सुनाइरहेका त छैनौँ ? ३ घण्टे परीक्षाले अंक ल्याउन उक्सायो तर मनोवृत्ति सिकाइएको छैन । असल मनोवृत्तिको विकास नभएका विद्यार्थीहरूले कुनै पनि क्षेत्रमा यसरी नै आफ्नो परिचय दिएका नहोलान् भन्न सकिन्न । विचरा विद्यार्थीको के दोष ? जे सिक्छ, त्यही दिन्छ । त्यही देखाउँछ ।
खलासीको व्यवहार- समग्र हाम्रो संरचनाको उपज हो । त्यो व्यवहारको निर्माण गर्ने र प्रोत्साहित गर्ने तपाईं हामी नै त हौँ । हामीले बनाएका संरचना र विधिको परिणाम त हो ।